अबको लकडाउन ‘लुजडाउन’, कस्तो छ सरकारी तयारी ? « Nagarik Khabar
अबको लकडाउन ‘लुजडाउन’, कस्तो छ सरकारी तयारी ?
प्रकाशित मिति : 8 June, 2021 6:27 am
निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सन्दर्भमा ‘कुनकुन निकाय सुचारु गर्ने र सहज बनाउने ? भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगसमेत राय लिइने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
अबको लकडाउन ‘लुजडाउन’